iMovie 10 mkpa ka ị mara
Mgbe ọ na-abịa Apple mgbe ahụ otu ihe n'ihi na n'aka na nke ahụ bụ ọrụ na onye mkpa na enye osịmde mgbe ọ na-abịa mmepe nke omume na ndị kasị mma n'ime ihe niile ugboro. Otu onye dị otú omume na Apple Inc mepụtara na nke a bụ iMovie 10 na na Itie oge ọ hụrụ a ike na otu ebe ibu mgbe ọ na-abịa downloads. Ọ na-na-kwuru na ọtụtụ ndị ọrụ na-adịghị maara nke ojiji nke usoro ihe omume na maka otu ihe a na nkuzi e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe Atụmatụ na ikwu na ojiji nke iMovie 10.
Gịnị bụ iMovie 10?
Na elu ọrụ fim na ọkaibe mmepe na ọ bụ-ahụ kwuru na iMovie 10 na-esote bụ gen video nakwa dị ka oyiyi edezi ngwá ọrụ na e mepụtara site Apple iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma mgbe ọ na na-abịa edezi videos nakwa n'ịrụ ọzọ aga-eme. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na nke kacha mma e ebudatara mgbe ọ na-abịa iMovie 10 dị ka ọ bụghị nanị na-eme ka usoro mfe ma na-emekwa ka n'aka na ihe kasị mma agbakwunyere ngwaọrụ na-nyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ọ kasị mma e nyefewo ha n'aka enweghị ihe ọ bụla nke dị ka ihe omume na-emekwa ka n'aka na ihe kasị mma ngwá ọrụ e na-akwado oru ngo na onye ọrụ na-eme ka. Ọ bụ ịrụ ụka adịghị otu nke kasị mma mmemme niile ugboro iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke nkà na ụzụ na a ụzọ na dị mfe na-eso na kwa pụrụ ịdabere na.
Download iMovie 10
Ka ibudata usoro ihe omume ọ bụ nnọọ mkpa iburu n'obi na onye ọrụ kwesịrị ịga na njikọ na-relaiable na na-anwale maka otu. Ọ dị ezigbo mkpa ka-enweghị ihe a onye ọrụ ga-enwe ike iji na-enweta arụmọrụ zuru oke nke usoro ihe omume. Dị ka akụkụ nke usoro ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe omume nke a nke na-abụghị nanị pụrụ ịdabere na kamakwa ọkọkpọhi kasị mma ka usoro ego na-eji mgbe omume na-eji. Na nke akụkụ a nke nkuzi onye ọrụ ga-download njikọ si elu àgwà weebụsaịtị nke ga-ekwe ka ya na nke kacha mma enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na n'otu oge ọ ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ na-akawanye ihe kasị mma nke usoro nke ahụ bụ ga-agbaso na nke a. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma download-esonụ bụ ụfọdụ nke njikọ na-a ga-agbaso na nke kacha mma na ọkaibe results na nke a.
4. Toms Guide downloads
5 na-ewu ewu Nkuzi maka iMovie 10
N'okpuru ebe a bụ n'elu 5 Nkuzi na onye ọrụ kwesịrị na-aga site iji jide n'aka na ndị kasị mma na ọkaibe omume ndị na-enyoba na nke kacha mma a napụtara n'ime oge.
1. nna ukwu iMovie 10.0.10
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ọmụmụ na dị online iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ala nke nke nkà mee mgbe ọ na-abịa iMovie isi. Na-eri nke N'ezie bụ $ 10 ọ na-e n'ihu site Udemy nke bụ otu n'ime ndị kasị mma na n'elu ọtụtụ video Nkuzi website nke oge a oge.
Onye ọrụ na wereworo N'ezie bụ ukwuu afọ ojuju na fim nwere ike hụrụ na URL n'elu na ọ bụ ihe niile n'ihi na eziokwu na-eri bụ ala na mkpokọta N'ezie na-ejideghi dị otú ahụ n'ụzọ ga-eme ka n'aka na nke kacha mma na ọkaibe oru ngo e kere na iji software usoro.
2. Apple iMovie 10: A Video Guide
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe ọmụmụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma si nke usoro ihe omume na mkpokọta afọ ojuju larịị zutere. The N'ezie bụ nnọọ n'efu na onye ọ bụla nwere ike ịnweta ya na URL n'elu na-amụta iji usoro ihe omume ..
Ọzọ N'ezie mere ka n'aka na onye ọrụ na-pacified na nke kacha mma na-nyere na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe mmemme nkà na-mepụtara na mmekọrita a usoro nke ga-enyere onye ọrụ na-eme n'ọdịnihu dị ka mma.
3. Olee otú ike mbụ nkiri site ná mmalite rụchaa iji iMovie
Ime nkiri bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe mmemme usoro na onye nwere ịmụta mgbe ọ na-abịa iMovie. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọ kasị mma na ndị ọkaibe omume ojiji a kọwara site a nkuzi dị mfe asụsụ.
A nkuzi ọnọde onye ọrụ na ndị kasị mma nhọrọ nke na-eji atụmatụ nke ihe omume na ụzọ dị iche iche na maka otu ihe ahụ ọ na-e gosiri elu na okporo ụzọ na-amụba ka a na peeji nke na eve na-agafe n'ụbọchị.
4. Mmalite malitere na iMovie 10
A nkuzi na-ahụ na ndị kasị mma na ala nke nkà omume ndị na-enyoba na kpamkpam dị iche iche ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ịgụ nkuzi ruo ọgwụgwụ inwe kacha n'ime ya.
The nkuzi kemgbe otu n'ime ndị kasị mma online dị ka ọ na-ahụ na asụsụ dị mfe na-eji na nke a na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta dị ka mma. Ọ ga-emekwa n'aka na a ike akara fọdụrụ mmụta ikike nke onye ọrụ nke bụ ukwuu nti.
5. iMovie 10.0.2 oké mkpa ọzụzụ
Mgbe oge na-nke na-ede nke a nkuzi ihe karịrị 27000 ọrụ e ekiri a N'ezie dị ka Lynda bụ otu nke kasị mma na ọkaibe website nke na-enye ohere 4000 yiri ọmụmụ. The professionalism bụ n'isi sekpụ ntị nke a N'ezie ma ọ bụrụ na iMovie.
The n'ozuzu ufiop na ọkaibe asụsụ nke e ji mee site onye nduzi bụ ihe kasị mma na maka otu ihe a na nkuzi na-ukwuu-atụ aro ka fim bụ maka bụ 98% nke 100.
Olee otú tinye iMovie ikwu n'ụzọ na Mac / iPhone / iPad
> Resource> iMovie> 5 Atụmatụ maka iMovie 10 mkpa ka ị mara